Movistar dia nanala ny Spanish BQ tao amin'ny katalaoginy | Vaovao momba ny gadget
Tsy maintsy mahazo antoka isika, na eo aza ny vokatra nasionaly, rehefa nilaza fa tao anaty doldrums ny BQ tato ho ato. Betsaka amin'ireo fitaovanao no miaina akanjo sy rovitra be loatra rehefa mandeha ny fotoana ary hadisoana rindrambaiko mitohy. Toa izany no iray amin'ireo antony lehibe mahatonga izany Movistar dia nanapa-kevitra ny hanafoana ny vokatra BQ amin'ny katalaoginy ara-barotra. Mahery setra ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny fitaovana ambany sy antonony, etsy ankilany, ny marika toa ny Huawei, DooGee na Motorola dia manome fitaovana mahefa (na mihoatra) amin'ny vidiny ambany.
Ny mpampita nomerika Fantatsika dia nanako ity fampahalalana voamarin'i Movistar ity. Amin'izao fotoana izao dia tsy hanana afa-tsy ny tahiry efa misy ao amin'ny magazay fivarotana Movistar izy ireo. Ho setrin'izany, koa Hitan'izy ireo izany toe-javatra izany tamin'ny alàlan'ny ekipa serasera BQ. Ny antony manokana nahatonga an'io toe-javatra io dia tsy voalaza mazava, na izany aza, rehefa niresaka tamin'ny mpiasa ao amin'ny magazay Movistar, dia toa fahita matetika ny fandefasana matetika fitaovana BQ amin'ny serivisy teknika. Na dia mety noho ny safidy hafa maro hafa aza izany, toy ny fifanarahana mpivarotra na ny marim-bola ambany, mpanjaka ny tsena.
Mandritra izany fotoana izany, ny BQ dia misy ao amin'ny katalaogin'ny ambin'ny orinasan-telefaona be solontena indrindra any Espana. Hatramin'ny taon-dasa dia ambany ny ora BQ, ny orinasa dia manao fandroahana asa lehibe noho ny fahaverezan'ny ampahany lehibe amin'ny tsena, ho tombontsoan'ny marika sinoa hafa izay manome vidiny mahefa bebe kokoa sy SAT izay tsy dia mitovy amin'ny atolotry ny BQ. Mandritra izany fotoana izany, manohy manara-maso ny orinasan'ny Espaniola izahay amin'ny resaka finday avo lenta, manintona ny hetsika rehetra eny an-tsena izay mety hanatsara ny fanantenany na hanimba ny fanantenany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Movistar dia manala ny Spanish BQ ao amin'ny katalaoginy ara-barotra
Adri ayala dia hoy izy:
Salama! aiza no misy azy ireo? hanana mailaka hifandraisana ve izy ireo?
Valiny tamin'i Adri Ayala
Nitaraina ny BQ noho izany
Volana vitsivitsy lasa izay dia nividy ny sainam-pirenenan'izy ireo aho, ny aquaris M5.5 3GB 32GB, ary rehefa afaka roa volana dia nanomboka tsy nahomby ilay fikasihana, mandra-pahatonga azy ho lasa adala ary farany nijanona tsy niasa tanteraka intsony ilay vavahady ara-batana.
Rehefa nandeha lalindalina kokoa aho dia nahatsapa fa misy tranga an-jatony ao amin'ny forum BQ sy amin'ireo tranonkala hafa.
Nalefako tany amin'ny serivisy teknika izany, ary nolavin'izy ireo tamiko ny fanamboarana milaza fa nihombo ny fitaovana ary tsy voasaron'ny fiantohana.
eny, nomena fihenam-bidy 15% mahafinaritra izy ireo raha nividy bq hafa aho ...... ianao ve no decoña, sa tsy izany?
Ny farany ... araka ny hitantaranao ao amin'ny lahatsoratrao. Faly amin'ny Huawei vaovao, fa miaraka amin'ny fanaintainana natsipy tany am-pako 300 €.
antonio220571 dia hoy izy:
TOA IZAY NAHATONGA AZY. MOBILE mitovy, bebe kokoa na latsaka amin'ny ora mitovy ary Tolotra mitovy mahatalanjona.
Valio ny antonio220571
Telefonica dia tsy misolo tena na inona na inona ho an'ny orinasa bq fa zavatra sisa tavela io, saingy mahaliana ity fampielezan-kevitra fanentanana ratsy ho an'ity marika ity dia avy amin'ny tanan'ny haino aman-jery izay nametrahan'ny Mediatek paston ary fantatsika rehetra fa ny bq miloka amin'ny Qualcomm noho ny olana miteraka Mediatek… .. tena liana amin'ny fifandrifiana rehetra?
eurotoston dia hoy izy:
Manana edison sy mahafaty aho, mila iray andro ny mampifandray WiFi sy miadana tokoa, serivisy ara-teknika 'PON IP FIX' ary mijanona ho iray ihany ny zava-drehetra, amin'ny farany dia mividy marika hafa aho.
Mamaly an'i Eurotoston
William Broken Helmet dia hoy izy:
Hafiriana manaitra ...
Valiny tamin'i Guillermo Casco Roto
Ny marina dia tsy tiako mihitsy ny marika BQ, toa finday mahatsiravina izy ireo.
paco jones dia hoy izy:
bq tsy miverina intsony ny bq farany ataoko ilay e6 ratsy laza dia hanome alahelo ahy ny mpiasa fa manantena aho fa hakatona tsy ho ela
Mamaly an'i paco jones
Mauri dia hoy izy:
Haha, mampihomehy ny mieritreritra fanentanana hanohitra bq amin'ny anaran'ny mpisoloky lehibe indrindra any Espana sy Amerika Latina. Ambonin'ireo bq no tsara indrindra !!!
Valio amin'i Mauri
Tsy mandoa ahy i Meditek ary nividy aquaris e5 fhd aho ary leo ny fitaovana ka rehefa vaky ny écran dia faly aho. Nafana ny andro. Feno dian-tanan-tànana hatrany ny écran. Tsy fahombiazana sy tara. Andao hamintina kely. Mahita mpiasa ianao ho an'ireo mieritreritra fa satria avy eto izy ireo dia vita daholo ny zava-drehetra.
JOSE GREEDO dia hoy izy:
Nanana Bq E5 aho nandritra ny 18 volana, ary ny Bq-ko mandeha amin'ny sarimihetsika.
Heveriko fa maro ny mpanjifa BQ no te-hividy finday antonony, manantena fa hitovy amin'ny iPhone na Samsung Galaxy 7 izany.
Nividy BQ aho amin'ny maha finday Espaniola ahy.
Raha ny marina, mpisoloky i Movistar.
Ary Meditek dia afaka nandeha naka an'i Margaritas tao amin'ny firenena.
Valiny tamin'i Joses Greedo
Eny eny, ratsy REHETRA afa-tsy ny BQ, ny Movistar ratsy, ny mediatek ratsy, ny ratsy ataon'ireo mpampiasa izay minia mampitombo ny bq x5 azy ireo, ratsy ireo mpamatsy fahatsiarovan-tena RAM izay namela azy ireo tsy hanana faladiany ram 2gb alohan'ny nanesorana ny fhd….
Fihatsarambelatsihy firy sy mino ny foiben'izao tontolo izao.
PetCube, manandrana ny fakan-tsary izahay hifehezana sy hilalao ny biby fiompinao na aiza na aiza